सीके राउतद्वारा “जनमत पार्टी” खोल्ने घोषणा
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति पश्चात् राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गरेका डा. सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले अन्तत् नेपालको संविधान भित्रै रहेर पार्टी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सिरहाको लहानमा आइतबारदेखी सुरु भएको गठबन्धनको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले सोमबार अन्तिम दिन विभिन्न निर्णय गर्दै पार्टीको नाम ‘जनमत पार्टी’ राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठक सम्पन्न पश्चात् राउतको फेसबुक मार्फत सार्वजनिक भएको विज्ञप्तिमा डा. राउतकै संयोजकत्वमा ३५ सदस्यीय जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिसमेत निर्माण गरेको उल्लेख छ । ....